गृहपृष्ठ » प्रवास » मायासँगै गए भन्दै साईप्रसबाट टिकटक भिडियो राखेकी नेपाली युवतीको लाश फेला
मङ्गलबार २३ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौं । एक अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ । युरोपको मुलुक साईप्रस लार्नाका सहरमा २३ वर्षीया नेपाली युवतीले आइतबार राति जी’वनत्या’ग ग’रेकी छिन् । दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खरे घर भइ हाल साईप्रसमा घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत शुक्री तामाङले जी’वनत्या’ग ग’रेकी हुन् ।
यस घटनाको पुष्टि गैरआवासीय नेपाली संघ साईप्रसले जनाएको छ । मृतक तामाङ सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा नेपालको काठमाडौँ ईन्टरनेशनल मेनपावरबाट साईप्रसको लार्नाका सहरमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न गएकी होनरी कन्सुलेट साईप्रसका प्रमुख डा. रामजीवन पञ्जियरले जानकारी दिनुभयो ।
मृतकको लाश उनकै परिवारको सल्लाह अनुसार स्वदेश पठाउने जनाइएको छ । मृतक तामाङ वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको एक वर्ष नपुग्दै साइईप्रसमा आएकी थिइन् । श्रीमान् सुबिन तामाङ नेपालमा ड्राइभरको पेशामा थिए । आइतबार दुर्घटनामा श्रीमानको मृत्यु भएको खबर पाएपछि सोही रातमा जी’वनत्या’ग ग’रेको बताइएको छ ।
मृतक तामाङले टिकटकमा श्रीमानको दुर्घटनाको भिडियो पोष्ट गर्दै आफ्ना आमा, बुबा, सासू र ससुरासँग माफी माग्दै आफू पनि आफ्नो ‘मुटु’ सँगै जान लागेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
आजका उत्कृष्ट शीर्षकहरु
अब राजा आउ देश बचाउ होइन, जनता आउ, राजा ल्याउ र देश बचाऊँ भनौं
अभिनेत्री कङ्गना राणावतले हालै दिएको एक बयानले बलिउडमा हलचल
सबैको मनमा बसेका रमेश प्रसाई बेहुदा हुँदाको क्षणमा जे देखियो, नन्दासँग लगनगाँठो कसियो
दुलाहाका दाजुलाई जन्ती भतेरको खान नमिठो भएपछि विवाह नै रद्ध, दुलही नलिइ फर्किए !
लाउ चेली सिन्दुर लाउ निको पार हृदयको घाउ भन्दै स्वेता खड्कालाई हौसला [ भिडियोसहित ]
इन्स्पेक्टरसँग लिभ इन टुगेदरमा बसेकी महिला मृत फेला, हतियार प्रयोग भएको पाइयो
राजतन्त्र र हिन्दुका लागि भनिएको प्रदर्श नेपाली कि भारतियको ? भारतिय नम्बर प्लेटका छन् सवारी
राजासँग माओवादीको गोप्य रणनीति आज आएर कमल थापाले खुलाइदिएपछि… !